त्रिभुवन अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुद्ध र यति एयरलाइन्सका विमान ठोक्किए, केछ अवस्था ? — Sanchar Kendra
त्रिभुवन अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुद्ध र यति एयरलाइन्सका विमान ठोक्किए, केछ अवस्था ?
काठमाडौं । सोमबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलबाट जनकपुर जान लागेको बुद्ध एयरको जहाज यति एयरलाइन्ससँग ठोक्किएको छ । विमानस्थल प्रहरीका अनुसार बुद्ध एयरको जहाज यति एयरलाइन्सको रोकिराखेको जहाजसँग ठोक्किएको हो । जहाज ठोक्किएपछि बुद्ध एयरको जनकपुर उडान रद्द भएको छ ।
ठक्करबाट दुवै जहाजमा सामान्य क्षति भएको छ । यता, विमानस्थल प्रहरीले भने बुद्ध एयरको जहाजले यति एयरलाइन्सको जहाजलाई छोएको मात्र बताएको छ । जहाज ठोक्किएर केकति क्षति भएको छ भन्ने विवरण आएको छैन । यता, विमानस्थल प्रहरीका अनुसार बुद्ध एयरको जहाजले यति एयरलाइन्सको जहाजलाई छोएको मात्र हो ।
विश्वको धेरै हवाई दुर्घटना हुने मुलुकहरुमा नेपाल पनि पर्छ । एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक पनि धेरै छ । डाँडाकाँडाले घेरेको राजधानी काठमाडौंमा अवतरण गर्ने क्रममा त कहिले पहाडी डाँडामा ठोकिएर विमान दुर्घटना हुने गरेको छ । काठमाडौंमा आवतरण गर्ने क्रममा यूएस–बंगलादेश विमान दुर्घटना हुदा ४९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। २२ जना घाइते भएका थिए भने केहीले विमानको झ्याल फोडी हामफालेर आफ्नो ज्यान जोगाएका थिए। त्रासद दुर्घटना मानिने यस्ता एयर क्र्यासहरुमा चालक दल र यात्रुहरु दुवैको ज्यान जाने गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई दुर्घटनाहरु – नेपाली आकाशमा चारवटा अन्तराष्ट्रिय विमान दुर्घटना भएका छन्। सन् १९९२ मा दुई वटा विमान दुर्घटना भए। थाइ एयवेजको फलाइट–३११ बैकंकबाट काठ्माडौं आएको विमान ३७ किलोमिटर उत्तरको पहाडको डाँडामा ठोक्किदा जुलाइ ३१ तारिखका दिन दुर्घटना हुदा चालक दलका १४ सदस्य सहित ९९ जना यात्रुको मृत्यु भएको थियो।
२८ सेप्टेम्बर,१९९२मा पाकिस्तान एयरलाइन्सको फ्लाइट–२६८ त्रिभुवन विमानस्थानमा अवतरणका क्रममा दुर्घटना हुदा एक सय ६७ जनाको ज्यान गएको थियो। २ सय २४ यात्रु बोकेको टर्किस एयरलाइन्सको विमान २०१५ मार्चमा त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटना भयो। दुर्घटनामा कुनै मानवीय क्षति नभएपनि विमान भने कामै नलाग्ने गरी ठूलो क्षति भयो।
२०१८ मार्च १२ तारिखका दिन यूएस–बंगलाको विमान त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटना हुदा ४९ जनाको ज्यान गएको थियो। घरेलु विमानमा दुर्घट्नाहरु- २७ जुलाई सन् २००० मा रोयल नेपाल एयरलाइन्सको डिएचसी–६ ट्विनअटर विमान दुर्घटना भयो। बझाङबाट डडेलधुरा जानेक्रममा दुर्घटना हुँदा चालक दलका तीन सदस्य सहित २५ जनाले ज्यान गुमाए।
काठमाडौँबाट लुक्ला जाने क्रममा यति एयरलायन्सको डिएचसी६–३०९डी ट्विनअटर विमान २५ मे २००४मा दुर्घटना भयो। लाम्जुरा पहाडमा खराब मौसमका कारण विमान ठोक्किदा चालक दलका तीन सदस्यको मृ’त्यु भयो।
सीता एयरवेजको डोर्नियर–२२८ विमान लुक्ला विमानस्थलमा आवतरणका क्रममा १ अक्टोबर २००४ मा दुर्घटनाग्रस्त बन्यो। लुक्ला विमानस्थलको धावनमार्गमा गोरखा एयरलाईन्सको डोर्नियर–२२० विमान ३० जुन २००५ मा धस्सिएर दुर्घटना भयो। दुर्घटना कसैको ज्यान नगएपनि चालक दलका तीन र त्यसमा सवार नौ जना यात्रु घाइते बने।
सन् २०१० मा तीन ठूला दुर्घटना भए। १९ अप्रिलमा नेपाल एयरलाइन्सको विमान डिएचसी–६ ट्विनअटर–३०० विमान उडान भर्ने क्रममा दुर्घटनामा पर्‍यो। अगष्ट २४ मा अग्नी एयरको विमान मकवानपुरमा दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार १४ जनाको ज्यान गयो। दुर्घटनामा ६ जना विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको थियो।
डिसेम्बर १५ तारिखका दिन लामिडाडाँबाट काठमाडौं आउँदै गरेको तारा एयरको डीएचसी–६ ट्विनअटर विमान ओखलढुंगाको मानेडाडाँमा ठोक्किदा चालक दलका ३ सदस्य सहित २२ जनाले ज्यान गुमाए। २५ सेप्टेम्बर २०११मा ललितपुरको विशंखु नारायणमा बुद्ध एयरको विमान दुर्घटना हुदा १९ जना ज्यान गयो।
२०१२ को मे १४ मा अग्नी एयरको डोर्नियर–२२८ विमान पोखराबाट जोमसोन जानेक्रममा विमानस्थल नजिकैको डाँडामा ठोक्किएर दुर्घटनामा हुँदा चालक दलका दुई सदस्य सहित १५ जनाको ज्यान गएको थियो। दुर्घटनामा चालक दलका एक सदस्य सहित ५ जनाको ज्यान बचेको थियो।
सोही वर्षको सेप्टेम्बर २८ मा सिता एयरको नाइन एन–एएचए डोर्नियर विमान भक्तपुरको मनोहरा किनारमा खस्दा विमानमा रहेका सबै १९ जनाको मृत्यु भयो। १६ मे २०१३ मा नेपाल बायुसेवा निगमको ९ एन– एबीओ विमान जोमसोम विमानस्थलमा दुर्घटना हुँदा ७ जनो सिकिस्त भए, १५ सामान्य घाइते।
२४ फ्रेबूअरी २०१६ मा तारा एयरको फ्लाइट–१९३ दुर्घटना हुँदा चालक दलका ३ सदस्य, दुई बालकसहित २३ जनाको मृत्यु भयो। सोही वर्षको अगस्टमा सुत्केरी सहित शिशु बोकेको फिसटेल एयरको हेलिकप्टर नुवाकोटमा दुर्घटना हुँदा पाइलट सहित ७ जनाको ज्यान गयो। २४ सेप्टेम्बर २०१६मा यति एयरलाइन्सको फ्लाइट–८९३ गौतम बुद्ध एयरर्पोटको रनवेमा सामान्य दुर्घटना भयो। प्लेनमा सवार २९ यात्रु सहित चालक दलका तीन सदस्य सकुशल रहे।